Daniela 7 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
7 Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Belsazara+ mpanjakan’i Babylona, dia nanonofy sy nahita fahitana i Daniela tamin’izy tao am-pandriana.+ Dia nataony an-tsoratra ilay nofy,+ ka notantarainy izay rehetra hitany. 2 Ary hoy izy: “Nijery aho ka izao no fahitana hitako tamin’ny alina: Nisamboaravoara ny ranomasimbe+ noho ny fifofofofon’ny rivotra+ efatry ny lanitra. 3 Dia nisy biby ngezabe efatra+ niakatra avy ao an-dranomasina,+ ary samy hafa+ daholo izy ireo. 4 “Ny voalohany dia tahaka ny liona.+ Nanana ny elatry ny voromahery+ izy. Mbola nijery ihany aho mandra-panongotra ny elany, ary ningaina niala tamin’ny tany izy,+ dia najoro tamin’ny tongony roa toy ny fijoron’ny olona, ary nomena fon’olombelona.+ 5 “Ary nahita biby hafa koa aho, dia biby faharoa, izay tahaka ny orsa.+ Niainga ny ila tenany,+ ary nisy taolan-tehezana telo teo am-bavany, teo anelanelan’ny nifiny. Ary izao no nolazaina taminy: ‘Mitsangàna, mihinàna nofo be dia be.’+ 6 “Mbola nijery aho taorian’izany, ka nahita biby hafa tahaka ny leopara,+ nefa nisy ela-borona efatra teo andamosiny. Nanana loha efatra io biby io,+ ary nomena fahefana hitondra. 7 “Mbola nijery ihany aho ka izao no fahitana hitako tamin’ny alina: Nisy biby fahefatra, izay nampahatahotra sy nahatsiravina ary natanjaka tsy nisy hoatr’izany.+ Nanana nify vy lehibe izy, ary nandrapaka sy nanorotoro, ka izay sisa tsy laniny dia nohitsakitsahin’ny tongony. Hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy, ary nanana tandroka folo.+ 8 Mbola nijery an’ireo tandroka aho, ary hitako fa nisy tandroka kely iray+ hafa nipoitra teo amin’izy ireo, ary niongotra teo anoloany ny telo tamin’ireo tandroka voalohany. Nisy maso toy ny mason’olona teo amin’ilay tandroka, ary nisy vava namoaka teny feno fireharehana.+ 9 “Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka seza fiandrianana,+ ary nipetraka teo Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be.+ Fotsy mangatsakatsaka* ny fitafiany,+ ary toy ny volonondry madio ny volon-dohany.+ Afo miredareda ny seza fiandrianany,+ ary afo+ mandoro ny kodiaran’ilay izy. 10 Renirano afo no nikoriana sy nivoaka avy teo anatrehany.+ Arivoarivo no nanompo azy,+ ary iray alina ampitomboina iray alina no nijoro teo anatrehany.+ Nanomboka ny Fitsarana,+ ka nisy boky nosokafana. 11 “Mbola nijery ihany aho tamin’izay fotoana izay noho ny teny feno fireharehana nataon’ilay tandroka.+ Mbola nijery aho mandra-pamono an’ilay biby, ary ny fatiny natsipy tao amin’ny afo mandoro ka levona.+ 12 Fa ny amin’ireo biby sisa kosa,+ dia nesorina ny fanjakany. Navela haharitra mandritra ny fe-potoana sy vanim-potoana+ iray anefa izy ireo. 13 “Mbola nijery ihany aho ka izao no fahitana hitako tamin’ny alina: Teny amin’ny rahon’ny+ lanitra, dia nisy toy ny zanak’olona+ nihananatona. Ary nahazo alalana hankeo amin’Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be+ izy, ka nentina ho eo anatrehany.+ 14 Ary nomena azy ny fitondrana+ sy ny voninahitra+ ary ny fanjakana,+ mba hanompo azy avokoa ny vahoaka sy ny firenena ary ny olona samy hafa fiteny.+ Ny fitondrany dia fitondrana haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra fa tsy handalo, ary ny fanjakany tsy ho rava.+ 15 “Dia ory izaho Daniela noho izany, ary nampahatahotra ahy ny fahitana hitako.+ 16 Dia nohatoniko ny iray tamin’ireo nijoro teo, mba hangatahako fanazavana azo antoka momba izany rehetra izany.+ Koa hoy izy tamiko, rehefa nampahafantatra ahy ny hevitr’izany: 17 “‘Ireo biby ngezabe efatra+ ireo dia mpanjaka efatra hitsangana avy amin’ny tany.+ 18 Ny olona masin’ilay+ Andriamanitra Fara Tampony+ anefa no hahazo ny fanjakana,+ ka handray an-tanana azy io hatramin’ny fotoana tsy voafetra, eny, hatramin’ny fotoana tsy voafetra.’ 19 “Ary tiako hofantarina tsara ny amin’ilay biby fahefatra, izay tsy nitovy tamin’ny biby hafa rehetra. Tena nampahatahotra be izy io, ary nanana nify vy sy hoho varahina, ka nandrapaka sy nanorotoro, ary izay sisa tsy laniny dia nohitsakitsahin’ny tongony.+ 20 Tiako hofantarina tsara koa ny amin’ireo tandroka folo teo amin’ny lohany,+ sy ilay tandroka hafa+ nipoitra ka nampianjera tandroka telo.+ Nanana maso io tandroka nipoitra io, sady nanana vava namoaka teny feno fireharehana,+ ary lehibe noho ireo tandroka hafa ny fahitana azy. 21 “Mbola nijery aho, ary hitako fa niady tamin’ny olona masina ilay tandroka ka naharesy azy,+ 22 mandra-pahatongan’ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be+ ka nahazo rariny ireo olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony.+ Ary tonga ny fotoana voatondro handraisan’izy ireo an-tanana ny fanjakana.+ 23 “Ary hoy izy: ‘Ilay biby fahefatra dia fanjakana fahefatra hisy eny ambonin’ny tany. Ho hafa noho ny fanjakana rehetra izy io, ary handrapaka ny tany manontolo, ka hanitsakitsaka sy hanorotoro azy.+ 24 Ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hipoitra avy amin’io fanjakana io.+ Ary hisy mpanjaka iray hafa koa hipoitra aorian’izy ireo. Ho hafa noho ireo voalohany izy,+ ary hampietry mpanjaka telo.+ 25 Ary hiteny hanohitra ny Avo Indrindra izy,+ ka hampahory foana an’ireo olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony.+ Hikasa hanova fotoana+ sy lalàna+ koa izy, ary hatolotra eo an-tanany ireo olona masina, mandritra ny fe-potoana iray sy fe-potoana roa ary antsasaky ny fe-potoana.+ 26 Ary nanomboka ny Fitsarana,+ ka nesorina tamin’io mpanjaka io ny fanjakany, mba hanafoanana sy handringanana azy tanteraka.+ 27 “‘Ary nomena an’ireo olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony ny fanjakana sy ny fitondrana ary ny fahalehibeazan’ny fanjakana eny ambanin’ny lanitra rehetra eny.+ Ny fanjakan’izy ireo dia fanjakana haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.+ Ary hanompo sy hankatò azy ireo ny fitondrana rehetra.’+ 28 “Mifarana eto ilay fitantarana. Dia nampahatahotra be ahy ny eritreritro, ka nivaloarika aho. Noraketiko tao am-poko+ anefa izay hitako sy reko.”
A.b.t.: “fotsy tahaka ny lanezy.”